मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन कम्तीमा पाँच दिन - pnpkhabar.com
You are at:Home»पत्रपत्रिका»मृतकको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन कम्तीमा पाँच दिन
By रबि धिताल on ३० फाल्गुन २०७४, बुधबार ०३:२९ पत्रपत्रिका
काठमाडौं ,फागुन ३०: युएस बंगला एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनामा मृत्यु भएकाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन पाँच दिन लाग्ने भएको छ । फरेन्सिक मेडिसिन विभागसँग सीमित स्रोत–साधन भएकाले पोस्टमार्टम रिपोर्ट आउन ढिला हुने भएको हो । सबै मृतकको सनाखत गर्न शव महाराजगन्जस्थित फरेन्सिक मेडिसिन विभागमा पोस्टमार्टमका लागि राखिएको छ ।
फरेन्सिक मेडिसिन विभागका प्रा.डा. हरिहर वस्तीले सीमित स्रोत–साधनबीच काम गर्नुपर्ने भएकाले रिपोर्ट आउन केही दिन लाग्ने बताए । विभागमा भएका १३ कर्मचारीले सोमबार रातिदेखि निरन्तर पोस्टमार्टमका लागि नमुना संकलन गरिरहेका छन् ।डा. वस्तीका अनुसार सोमबार रातिदेखि मृतकको हुलिया र जाहेरीसहितको विवरण बुझ्ने काम भइरहेको छ ।
विवरण बुझ्ने, पोस्टमार्टम गर्ने र परिवारका सदस्यलाई शव बुझाउने प्रक्रिया भएकाले केही दिन लाग्ने उनले बताए । सबैको विवरण बुझेपछि फरेन्सिक मेडिसिन विभागले पोस्टमार्टमको रिपोर्ट मृतकका परिवारका सदस्यलाई दिनेछ । नर्भिक अस्पतालमा उपचार गराइएका विमानका पाइलट अबिद सुल्तानको पनि मंगलबार मृत्यु भएपछि मृतकको संख्या ५० पुगेको छ । सोमबार अवतरणका क्रममा अनियन्त्रित भएर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान दुर्घटनाग्रस्त भएको थियो ।